တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လည်ပတ်နေသော ဘ၀များစွာ ...
Posted by မေဓာဝီ at 4:00 AM
တော်တော်တွေးတတ်တာပဲ…။ ကျနော်က ဒီနေ့ စာမရေးနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ မမေက အနိုင်ပိုင်းသွားတယ်။ သိပ်တော့ မနာလိုပါ။ :)
ကျနော်လဲ မမေရဲ့ ဒီစာကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတယ်။ ကျနော်က ဇာခြင်ထောင်အပြင်ဘက်ကို ရောက်နေတာလား၊ တွဲလက်တွေနဲ့ ပြုတ်ထွက်နေတာလား၊ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀ ကစားနည်းထဲမှာ ကျနော် ပါဝင်ကစားနေသေးရဲ့လား ဆိုတာပါ။ အရှုံးတော့ မပေးချင်တာ အမှန်ပဲ။ တွဲလက် တခုတလေ ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ လိုက်တွဲပြီး အဲဒီ ပျော်ရွှင်စရာ ကမ္ဘာ ကစားနည်းထဲကို ပါဝင်နေချင်တာပါပဲ။
မမေပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့နဲ့ ကျနော်ရတာ လွဲသွားရင် ကျနော့်ညံ့ဖျင်းမှုပါ..။
6/25/2007 4:23 AM
thanks , MaMay
6/25/2007 4:27 AM
မမေ...ညီမက လက်နစ်ဘက်ထဲ တိုးဝင်လာတာလား၊ လက်တဘက်က ပြုတ်ထွက်သွားတာလား ဒါမှမဟုတ် စည်းဝိုင်းအပြင်ရောက်နေတာလား... ရေရေရာရာ မသိတော့ဘူး...သေချာတာက မမေစာဖတ်ပြီး အထီးကျန်ဆန်သလိုနဲ့ အားငယ်လာတယ်...
6/25/2007 4:35 AM
ကျွန်တော်တို့ကတော့ မအေး ခြင်ထောင်လို့ မအော်ဘဲ မအေး ခြင်းတောင်း လို့ဘဲအော်ခဲ့ကြတာ။
မအေး ခြင်းတောင်းဆိုရင် ပို အဓိပ္ပါယ်ရှိမလား လို့ ..
ခုမှ ခြင်းတောင်းဆိုတော့လဲ ဟုတ်သလိုလို။
ဒါမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကကတော့ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ထဲက
ကိုယ်သာ လွတ်ထွက်သွားခဲ့ရင်လို့ တွေးမိတော့
မမေတို့ အတွေးတွေကတော့ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်လည်း စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားတာပဲ။
people born alone and die alone. people are proud when they are successful...people are depress when they are failed or face dilemmas. no one can help you...you can help anyone. it is part of human life. if we have no religious, we have nothing to rely on. I am proud of beingabuddhist. Buddhist teaches me how to live and die. thanks.
I kyanaw le blog nar kya par dal, yay tar taw ma hot par buu, phat tar,achein ma ya loathay sate ma phat naing taung gaung see lay taw lar kyi phyit par dal...kyay zuu par ma may
ခုတလော တော်တော်လေးကျွန်တော်မအားပြန်ပါဘူး။ ခုမှပဲ မမေစာတွေ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ဖတ်ရတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ရောက်နေတဲ့လူမှန်း မသိပါဘူး။ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ သိတာတော့ တစ်ခု ရှိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်ဆော့ချင်ပါတယ်။
မမေဓာဝီရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို မကြာမကြာတော့ လာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်၊ မှတ်ချက်သာ ၀င်မရေးဖြစ်တာပါ။ ဒီစာကိုတော့ သဘောကျလွန်းလို့ ကျကြောင်း မှတ်ချက် ၀င်ရေးပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ပြောတာပါ ကြိတ်ချီးကျူးပါတယ်လို့...